Imbali ka Lewis kunye neClark Expedition
Imbali kunye noBuchule be-Lewis kunye ne-Clark Expedition kwi-Pacific Coast
NgoMeyi 21, 1804, uMeriwether Lewis noWilliam Clark basuka eSt. Louis, eMissouri kunye neCorps of Discover nokuya entshonalanga ukuze bahlolisise baze baqaphele amazwe amasha athengwa yi-Louisiana Purchase. Ngokufa omnye kuphela, iqela lafikelela kwi-Pacific Ocean ePortland waza wabuyela eSt. Louis ngoSeptemba 23, 1806.
Ngo-Apreli 1803, iUnited States, phantsi koMongameli uThesham Jefferson, ithenge iikhilomitha ezili-828,000 zeekhilomitha ezili-2,144,510 zomhlaba waseFransi.
Ukuthengwa komhlaba kuyaziwa ngokuba yi- Louisiana Purchase .
Amazwe afakwe kwi-Louisiana Ukuthengwa yayingasentshona yoMlambo waseMississippi kodwa ayengachangekanga kwaye ngenxa yoko ayengaziwa ngokupheleleyo kwi-US kunye neFransi ngelo xesha. Ngenxa yoko, kungekudala emva kokuthengwa komhlaba uMongameli uJefferson ucele ukuba iCongress ivume i-$ 2,500 yee-exploratory expedition.
Emva kokuba iCongress ivume iimali zohambo, uMongameli uJefferson wakhetha uKaputeni uMeriwether Lewis njengenkokeli yalo. U-Lewis wakhethwa ngokuyinhloko kuba wayesebenolwazi oluthe lwasentshonalanga kwaye wayeyigosa elinobuchule. Emva kokuba enze amanye amalungiselelo okuhamba, uL Lewis wacinga ukuba wayefuna umphathi-mpikiswano kwaye wakhetha elinye igosa laseArms, uWilliam Clark.
Iinjongo zolu hambo, njengoko kuchazwe nguMongameli uJefferson, kwakufuneka zifunde iintlanga zaseMerika ezihlala kuloo ndawo kunye nezityalo, izilwanyana, i-geology kunye nomhlaba wendawo.
Uhambo lwalo lwalufuneka lube ludibanisa kwaye luze luncede ekudluliseni amandla phezu kwamazwe kunye nabantu abahlala kuyo baseFrench naseSpain baya eUnited States. Ukongezelela, uMongameli uJefferson wayefuna ukuba uhambo lufumane umgama wamanzi ukuya kwiNtshona Coast kunye neLwandle lwasePacific ukwenzela ukuba ukwandiswa kweentlabathi kunye neentengiso kuza kuba lula ukufikelela kwiminyaka ezayo.
Uhambo luka Lewis kunye noClark lwaqala ngokusemthethweni ngomhla kaMeyi 21, 1804 xa bona kunye namanye amadoda angama-33 akha iCorps of Discover evela kwikampu yaseSt. Louis, eMissouri. Inxalenye yokuqala yenkxaso yalandelwa indlela yoMlambo waseMissouri ngexesha apho, bawela kwiindawo ezifana ne-Kansas City namhlanje, eMissouri naseOmaha, eNebraska.
Ngo-Agasti 20, 1804, i-Corps yabona ukubulawa kwayo kokuqala kunye kuphela xa uSergeant Charles Floyd efa nge-appendicitis. Wayeyindoda yokuqala yase-US ukuba abulale entshonalanga yoMlambo waseMississippi. Kungekudala emva kokufa kuka-Floyd, iCorps yafikelela kwimida yeThafeni eliMkhulu kwaye yabona iintlobo zeentlobo ezahlukeneyo zendawo, ezininzi zazo ezazingumtsha kubo. Baphinde badibana nesizwe sabo sokuqala seSioux, iYankton Sioux, ngokudibana nokuthula.
I-Corps intlanganiso elandelayo kunye neSioux, nangona kunjalo, kwakungekho ngoxolo. NgoSeptemba 1804, iCorps yadibana neTeton Sioux ngasentshonalanga kwaye ngexesha lokuhlangana nenye yeentloko zafuna ukuba iCorps ibanike isikebhe ngaphambi kokuvunyelwa ukuba idlule. Xa ii Corps zavuma, iiTeton zatshengisa ubundlobongela kunye neCorps ekulungele ukulwa. Ngaphambi kokuba intshutshiso enzulu iqalwe noko, zombini amahlangothi athatyathwa.
Ingxelo yo kuqala
Uhambo lukaCorps lwaluqhubela phambili ngokuphumelelayo ukunyuka kwabusika xa bema kwiidolophana zesizwe samaMandan ngoDisemba 1804.
Ngesikhathi esalindele ebusika, uLee noClark babesebenza iCorps i-Fort Mandan kufuphi nosuku lwe-Washburn, eNorth Dakota, apho bahlala khona ngo-Apreli 1805.
Ngeli xesha, uLee noClark babhala ingxelo yabo yokuqala kuMongameli Jefferson. Kuzo zilandelelanisa iintlobo ezili-108 zezityalo kunye neentlobo ezingama-68 zeemigodi. Emva kokushiya i-Fort Mandan, uLee noClark bathumela le ngxelo, kunye namanye amalungu ehambo kunye nemephu ye-US ekhishwe nguClark e-St. Louis.
Emva koko, iCorps yaqhubeka yindlela eya kuMlambo waseMissouri kwaze kwaba yilapho yayifike emfolokweni ngasekupheleni kukaMeyi 1805 kwaye yaphoqelelwa ukuba ihlule ihambo ukuze ifumane uMlambo waseMissouri. Ekugqibeleni, bakufumanisa kwaye ngoJuni uhambo lwaluhamba kunye lwawela umlambo wamanzi.
Kungekudala emva koko iCorps yafika kwi-Continental Divide kwaye yaphoqeleka ukuba iqhubeke nohambo lwayo ehashe e-Lemhi Pass emngceleni waseMontha-Idaho ngo-Agasti 26, 1805.
Kanye emva kokuhlukana, iCorps iphinda iqhubeke nohambo lwayo kwiinqanawa phantsi kweMilly Mountains e-Clearwater River (enyakatho ye-Idaho), uMlambo weNyoka, ekugqibeleni uMlambo wase-Columbia ukuya kwii-Today's Portland, Oregon.
I-Corps ekugqibeleni yafika kwi-Pacific Ocean ngoDisemba 1805 waza wakha i-Fort Clatsop ngasecaleni loMlambo wase-Columbia ukulinda ebusika. Ngexesha labo kwi-fort, amadoda ahlola loo ndawo, azingela i-elk kunye nezinye izilwanyana zasendle, ahlangana nezizwe zaseMerika zaseMelika, kwaye zilungele uhambo lwazo ekhaya.
Ukubuyela eSt. Louis
Ngo-Matshi 23, 1806, uLee noClark kunye nabo bonke abaseCorps bashiya iFort Clatsop baza baqalisa ukubuyela eSt. Louis. Emva kokufikelela kwi-Continental Divide ngoJulayi, i-Corps yahlukanisa ixesha elifutshane ukuze uLi Lewis ahlolisise uMlambo waseMarias, umlambo waseMissouri.
Babuya bahlangana kwakhona kwi-Yellowstone naseMissouri Rivers ngo-Agasti 11 baza babuyela eSt. Louis ngoSeptemba 23, 1806.
Impumelelo yeLee noClark Expedition
Nangona uLee noClark abazange bafumane umgama wamanzi ovela eMlambo iMississippi ukuya e-Pacific Ocean, ukuhamba kwabo kwazisa ubuninzi bolwazi malunga nemimandla esandula kuthengwa entshona.
Ngokomzekelo, ukuhambela kwanikezela ubungqina obubanzi kwizinto ezisemgangathweni zendalo. ULee noClark bakwazi ukukhuphela iintlobo zezilwanyana ezingaphezu kwe-100 kunye nezityalo ezingama-170. Babuyisela kwakhona ulwazi malunga nobukhulu, amaminerali kunye ne-geology yendawo.
Ukongezelela, uhambo lwalunxulumene nolwalamano lwabantu baseMerika kummandla, enye yeenjongo eziphambili zikaMongameli Jefferson.
Ngaphandle kwintsebenziswano neTeton Sioux, olu lwalamano lwalube lukhulu uxolo kwaye iCorps ithole uncedo olubanzi kwiintlanga ezahlukahlukeneyo abadibeneyo malunga nezinto ezifana nokutya nokuhamba.
Ngolwazi lwendawo, uLee noClark bahamba ngolwazi olubanzi malunga negrafu yePacific Northwest kwaye bavelisa amabalazwe angaphezu kwama-140 alo mmandla.
Ukuze ufunde kabanzi malunga noLee noClark, tyelela indawo yeSizwe yeGrafi ezinikele ekuhambeni kwabo okanye ufunde ingxelo yabo yenkcitho, eyapapashwa ngo-1814.
U-Ella Baker: Umququzeleli weeLungelo loLuntu
Isikhundla seThebula: Ukukopela Amagumbi aBancinci
IziJamani ezininzi zesiJamani
Ibhokisi le-Chocolates Math Stumper ngeSolution
I-20 ye-Metal Hair Ballads yama-80s no-90
Indlela yokwazisa i-Paint Canvas yakho